7dị XNUMX nke Ndị Ahịa Digital | Martech Zone
Ndị na-ebi akwụkwọ na Optify kesara ihe omuma a n'oge gara aga ma anyị bịara ịkekọrịta ya. Nke a bụ ihe ọchị na ụdị 7 nke ndị na-ere ahịa dijitalụ. Ezie na m hụrụ n'anya ọchị, e nwekwara ihe na-akpata nchegbu na infographic n'ezie na-ewelite… marketers agbasaghị ime ihe ha na mma na.
Anyị na-ele anya na ọbụna ndị ahịa anyị nọgidere na-enweta akụ na usoro ndị na-adịghị arụ ọrụ - naanị n'ihi na ha nwere obi iru ala na ha. N'ikwu eziokwu, ọ bụ ya mere inwe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa dị ka onye mmekọ dị egwu. Agencylọ ọrụ a na-enwekarị (ma ọ bụ kwesịrị) inwe nka na chanel ndị ị nwere ike amachaghị.
Tags: ule uleAnalyticsbetannukwu databranddatadesigndijitalụ ahịadigital marketingemailemail Marketingndịnahavehtagsinfographickeonweelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ na netwọkTechnologytestingngwaọrụọdịnalaọdịnala ọdịnala
Dee 23, 2013 na 11: 19 AM
Abụ m ngwakọta nke Data Whiz na Snarky Marketer. M na-agbalị ka m ghara ịdị oke snarky, mana oge ụfọdụ data na-amanye m ịkpọ oku omume ọjọọ.
Dee 23, 2013 na 11: 20 AM
Achọpụtara m onwe m ịbụ onye na-emegide iwu 🙂
Dee 25, 2013 na 6: 46 AM
oké infographic, snarkys kwesịrị n'elu, n'ihi na e nwere soooooo ọtụtụ n'ime ha 🙂
Dee 28, 2013 na 9: 47 AM
Ebee ka onye mgbasa ozi mgbasaozi mmekọrịta dị? 😉